Kanaalka Suweys: astaamaha, dhismaha iyo taariikhda | Saadaasha Shabakadda
Bani'aadamku wuxuu ahaa halyeeyada waxyaabo badan oo dhismeed. Abuuritaanka kanaal isku xiri kara Badda Cas iyo Badda Dhexe ayaa ahaa dhiirigelinta ilbaxnimooyinkii hore ee soo buuxiyay Isthmus of Suez. Waxaa jiray dhowr isku day ilaa dhamaadka la dhisay Kanaalka Suweys. Wadadu waa mid muhiimad weyn ka leh dhinaca dhaqaalaha marka laga hadlayo gadaalna waxaa ku leh sheeko aad u xiiso badan oo aan halkan ku sheegi doono.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato kanaalka Suweys, dhismihiisa iyo taariikhdiisa.
1 Naqshadeynta kanaalka Suez
2 Taariikhda Kanaalka Suweys
4 Ahmiyada dhaqaale
Naqshadeynta kanaalka Suez
Dib ugama laabanayno illaa isku daygii ugu horreeyay ee aan ku dhisno kanaalkan qarnigii XNUMX-aad ee dhalashadii Ciise xilligaas, Fircoon Sesostris III wuxuu amar ku bixiyay in la dhiso kanaal kaas oo xiri kara webiga Niil iyo Badda Cas. In kasta oo ay lahayd meel yar oo caddaalad ah, haddana way ka badnayd intii ku filnayd in la dejiyo dhammaan doomaha xilligaas jiray. Wadadan ayaa si ballaadhan loo adeegsaday ilaa badhtamihii qarnigii XNUMXaad ee dhalashadii Ciise ka hor.Marka lamadegaanku wuu ballaadhnaa oo wuxuu helay qayb ballaadhan oo dhulka ah oo xagga badda ah, isagoo xannibay marinka looga baxo.
Sababtaas darteed Fircoon Neco wuxuu isku dayay inuu dib u furo kanaalka isagoon wax guul ah gaarin. In ka badan 100.000 oo nin ayaa ku dhintey isku dayga dib loogu furayo kanaalka. Waa qarni ka dib in boqorkii Faaris, Daariyus, waxay hawl galisay shaqooyinkii si ay u soo ceshato qaybta koonfureed ee kanaalka. Fikradda ayaa ahayd in la keeno kanaal ay maraakiibta oo dhami si toos ah ugaga gudbi karaan badda Mediterranean iyaga oo aan marin Wabiga Niil. Shaqooyinku waxay dhammaadeen 200 sano ka dib xilligii Ptolemy II. Qaab dhismeedku wuxuu la mid ahaa kan hadda Suez Canal.
Waxaa jiray farqi udhaxeeya sagaal mitir oo udhaxeeya heerka biyaha Badda Cas iyo tan Badda Dhexe, marka tan waa in lagu xisaabtamo xisaabinta dhismaha kanaalka. Intii lagu jiray gumeysigii Roomaanka ee Masar, horumarin la taaban karo ayaa laga dareemay taasoo kobcin karta ganacsiga. Si kastaba ha noqotee, ka dib bixitaankii Roomaankan kanaalkan mar labaad baa laga tegey oo waxba looma isticmaalin. Intii lagu jiray xukunka Muslimiinta Khaliif Cali wuxuu mas'uul ka ahaa soo kabashadiisa. Qarni dhan oo ay shaqeynayeen ka dib waxaa markale dib u soo ceshaday lamadegaanka.
Waa inaan maanka ku haynaa in lamadegaanka uu leeyahay dhaqdhaqaaq isdaba-joog ah oo muddo soconaya iyo in ciiddu ay burburin karto wax kasta oo jidkiisa ku jira.
Taariikhda Kanaalka Suweys
Jiritaanka kanaalka Suweys ayaa gabi ahaanba qarsoonaa tan iyo markaas kun sano. Ilaa imaatinkii Napoleon Bonaparte oo yimid Masar 1798. Kooxdii aqoonyahanada ahayd ee Napoleon lasocday waxaa jira injineero caan ah wuxuuna lahaa amarro qaas ah oo uu ku kormeero ismarka si loo xaqiijiyo suurtogalnimada furitaanka kanaal u oggolaan kara marinka. ee ciidamada iyo badeecadaha loo dirayo Bariga. Ujeedada ugu weyn ee kanaalka ayaa ah waana jidadka ganacsiga.
In kasta oo la helay raadadka fircoonnadii hore raadinta hab dib loogu furo kanaalka, injineerka shuruudaha dhismihiisa ayaa gabi ahaanba aan suurtagal ahayn. Maaddaama ay sagaal mitir u kala duwan yihiin labada badood, ma oggolaan dhismihiisa. Sannado ayaa laga soo gudbay, kiiloomitirkii kordhay wuxuu ahaa baahida loo qabo in la furo marinkan bada.
Horeba wuxuu kujiray kacaankii warshadaha, ganacsiga bariga Aasiya wuxuu joojiyay inuu noqdo mid raaxo leh wuxuuna noqday mid muhiim u ah kobaca dhaqaalaha dhamaan awoodaha waaweyn ee reer Yurub. 1845, hal waddo oo dheeri ah ayaa lagu daray, oo tii ugu horreysay ahayd Khad tareenka Masar isku xira Alexandria iyo dekedda Suez. Waxaa jiray waddo dhinaca dhulka ah oo dhex marta lama degaanka Siinay laakiin waxay ahayd mid aan macquul ahayn sababo la xiriira mugga xamuulka ay gawaarida qaadi karaan. Ganacsiga goobahan ayaan haba yaraatee ahayn mid hagaagsan.
Khadkii ugu horreeyay ee sayniska tareenka wuxuu ahaa mid waxtar weyn u lahaa safarka rakaabka laakiin kuma filna qaadista badeecadaha. Ulama tartami karin laalaabyada cusub ee xilligaa jiray, kuwaas oo aad u dheereeyay isla markaana leh culays badan.
Ugu dambeyntiina, shaqooyinka dhismaha kanaalkan waxay bilaabeen 1859 diblomaasi Faransiis ah iyo ganacsade Ferdinand de Lesseps. Kadib 10 sano oo dhisme ah, waa la daah furay waxayna noqotay mid kamid ah howlaha injineernimada ugu weyn aduunka. Kumanaan shaqaale ah sida beeraleyda Masar ayaa xoog ku shaqeeyey iyo qiyaastii 20.000 oo ka mid ah waxay u dhinteen duruufaha qalafsan ee dhismaha lagu qabtay. Waa markii ugu horreysay taariikhda oo dhan in mashiinno qodista oo si gaar ah loogu talagalay shaqooyinkan loo adeegsaday.
Faransiiska iyo Boqortooyada Midowday waxay maareeyeen kanaalkan muddo sanado ah laakiin Madaxweynaha Masar ayaa qarameeyay 1956-kii. Dagaalkan, Israa’iil, Faransiiska iyo Boqortooyada Midowday ayaa soo weeraray waddanka. Kadib, intii u dhaxeysay 1967 iyo 1973 waxaa dhacay dagaalo carbeed iyo Israa’iil, sida Dagaalkii Yom Kippur (1973).
Dayactirkii ugu dambeeyay ee kanaalka Suez wuxuu ahaa sanadkii 2015 iyadoo qaar ka mid ah shaqooyinka ballaarinta ay sababeen khilaafaadyo badan tan iyo markii ay gaareen awoodda iyo dhererka guud ee ay hadda leedahay.
Maalmahan waxay noqotay mid xoogaa caan ah oo lagu beddelan karo sababtoo ah Gundhigga markabka Ever Given, oo ay saaranyihiin in kabadan 300 markab iyo 14 doonyood oo dabada ka shaqeynaya adag tahay in la soo celiyo taraafikada badda ee aagga.
Muhiimadda dhaqaale asal ahaan waxay ku nooshahay xaqiiqda ah in qaar ka mid ah maraakiibta 20.000 ay gacmahooda ku maraan kanaalkan waana marin si buuxda loo mari karo oo laga isticmaalo Masar. Tan awgeed, gobolka oo dhan wuxuu noqday wax lagu barwaaqoobay mahadcelin ganacsiyeed. Waxay u oggolaaneysaa ganacsiga badaha u dhexeeya Yurub iyo Koonfurta Aasiya waxayna leedahay meel istiraatiiji ah oo cadaalad ah.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto Kanaalka Suweys, dhismihiisa iyo taariikhdiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Kanaalka Suweys